युरोप भनेरमात्रै के गर्नु र ! « Khabarhub
युरोप भनेरमात्रै के गर्नु र !
स्कूले जीवनमा गाउँमा छिमेकीको छोराले पठाएको चिठी पढ्दा र सँगै आएको रङ्गीन तस्बिर हेर्दा युरोप टेक्ने भुत ममाथि पनि जागेको थियो कलिलो उमेरमै ।
सफा सडक, अग्ला घर, हाप्पेन्ट, सेता जुत्ता र कालो चस्मामा नमराजदाइ तमिल सिनेमाका हिरो झैँ देखिन्थे । घर आउँदा उनले ल्याउने चकलेट, अत्तर अनि खेलौना मेरा लागि अनौठा थिए ।
अटोमेटिक रेल, आठ लेनका सडक, घरमाथि चढ्न लिफ्ट, महँगा कार, बिरामी परे काममा नगए पनि सरकारले पूरै तलब दिने, उपचार नपाएर मान्छे मर्नु नपर्ने, सरकारले सित्तैमा उपचार गराइदिने, सडकमा सुत्ने मान्छे नहुने, जथाभावी मूल्य नबढ्ने, अनुशासित जनता । नेपालमा जस्तो दुःख नहुने ।
यस्तो कथा सुनेपछि त नमराजदाइ त स्वर्गमै बस्छन् जस्तो लाग्थ्यो । उनले बनाएको तीन तले पक्की घर अनि उनको महँगो मोटर साइकल । मेरो कच्चा दिमाग एकोहोरो लाग्यो– म पनि एकदिन त्यो स्वर्ग हेर्न जान्छु !
विद्यार्थीको हैसियतमा सन् २००७ मा मैले पनि युरोपको भूमि टेकेँ । सुरुमा नमराजदाइले सुनाएजस्तै लाग्यो । द्रुत गतिमा कुद्ने रेल, खानाका अनेक परिकार, अग्ला घर, सफा लुगा लगाएका मानिसहरू ।
दिन बित्दै गए । युरोप टेकेको दशक बितेको पत्तो भएन । संघर्ष गर्दै जाँदा सन् २०१६ मा मैले पहिलो कम्पनी खोलेँ ‘अन्नपूर्ण’ नाममा । हाल विभिन्न नाममा म करिब २ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर सरकारलाई कर तिर्दै आएको छु । समग्रमा हेर्दा कम्पनीले गरेको व्यापारको ४० प्रतिशत हुन्छ, जो उच्च करदरमा पर्छ ।
हालका दुई महिनामा टमाटरको भाउ १.२९ बाट ६ युरो पुग्यो । एकपटक प्रयोग गरेपछि फाल्नुपर्ने ५० थान मास्कको बट्टा ३.९५ युरोबाट ५३ युरो पुगेको छ । दुई महिना अघि मैले ३.९५ युरोमा किनेको थिएँ । मास्कको भाउ १३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । खोइ त फ्रेन्च सरकारको कानुनले रोकेको !
अचम्मको कुरो मदिराजन्य पदार्थ भने बजारमा सुलभरूपमा उपलब्ध छ । विभिन्न ब्रान्डका बियर एक कार्टून किन्दा दोस्रो कार्टूनमा ६० प्रतिशतसम्म छुटमा पाइएको छ । सरकार पाँच घन्टा समय दिएर व्यवसाय बन्द गर्न उर्दी जारी गर्छ टेलिभिजनमार्फत । जो आफैँमा अप्रत्याशित समाचार बन्छ ।
अमेरिका र इटलीजस्ता देशहरूमा जनताकेन्द्रित राहतका कार्यक्रमले ठूलो संख्या लाभान्वित भएको छ । आफ्ना जनतालाई प्रतिव्यक्ति र बालबालिकालाई पनि राहत रकम बैंक खातामा उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति आफ्नो सम्बोधनमा हतास स्वरमा ‘राज्य अभिभावक हुनेछ’ भन्छन् । जनतालाई राहत महसुस हुन्छ । घरभाडा, बिजुली, पानी, बीमा निःशुल्क गराउने प्रतिबद्धता छ राष्ट्रपतिको भाषणमा । कर्मचारीलाई बेरोजगारी भत्ता दिने, स्वास्थ्य महामारीका कारणले कुनै पनि कम्पनी बन्द नहुने अनि राज्य अभिभावक बन्ने राष्ट्रपतिको भनाइमा जनता विश्वस्त थिए ।
तीस दिनभन्दा बढी पर्खेपछि सरकारले विशेष आवेदन भराउने र व्यवसायीहरूलाई १ हजार ५ सय युरो राहत दिने घोषणा ग¥यो । घरभाडा नै जो प्रतिमहिना ६ हजार युरो छ । दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ लकडाउन भएको, आकस्मिक लकडाउनको राहत आएको छैन । राज्यलाई कर बुझाएको के काम लागि रहेछ त !
विश्वमा सबैभन्दा राम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष अनि स्वास्थ्य सुविधा भएको देश मानिएको अनि आर्थिकरूपमा छैटौँ स्थानमा रहेको देश हो फ्रान्स । यता अस्पतालमा भेन्टिलेटर र बेडको अभावले बिरामी भुँइमा बस्नु परेको छ, पीपीई अभावमा फोहोर फाल्ने झोला प्रयोग गर्नु परेको छ । सिटामोल हप्तामा ८ चक्की मात्रै किन्न पाउने त्यो पनि स्वास्थ्य कार्डको अभिलेख राखेर ! यस्तो अवस्थालाई के भन्ने ?
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यस्थापन भनेर ४ सय युरो शुल्क लिन्छ सरकार । स्वास्थ्य उपकरण, मास्कजस्ता अति उपयोगी वस्तुमा चीनमाथि निर्भर छ । गाउँका मेयर एउटा मास्क बाँडेको फोटो फेसबुकमा पोष्ट गर्छन् ।
जुन देशका नेताको ताल पनि उस्तै, जे गरे पनि जस लिनै पर्ने । चुनावको छेउछाउमा लकडाउन भएको ५५ दिनपछि सरकार मास्क २ हप्तापछि सबैलाई पुग्ने आउँदैछ भन्ने सन्देश दिन थालेको छ ।
फ्रान्समा भने हालै सार्वजनिक भएको विद्यार्थीकेन्द्रित राहत प्याकेजमा प्रतिविद्यार्थी २ सय यूरो दिने भनिएको छ । काम गरिरहेका श्रमिकलाई तलबको ८४ प्रतिशत दिइएको छ । बेरोजगारलाई खासै ठूलो राहत छैन ।
इटाली र पोर्चुगलले गैरकानुनीरूपमा बसेका आप्रवासीलाई समेत एकमुष्ठरूपमा राहत दिएका छन् । यो खुसीको कुरो हो ।
फ्रान्सको माथिल्लो सदनमा पटकपटक बहस भए पनि निर्णय गर्न अझै हिच्किचाइरहेको छ फ्रेन्च सरकार ।
हरेक व्यवसायको बीमा गर्नु अनिवार्य छ युरोपमा । आकार हेरेर वर्षको कम्तीमा २ हजार युरो बीमा शुल्क असुल्छन् बीमा कम्पनीले । खोइ बिमा कम्पनीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएको ? फ्रेन्च सरकार मौन छ । बिमा कम्पनीलाई पीडितलाई भुक्तानी देऊ भन्दैन ।
आर्थिक संकटले परिवर्तन भएको पनि हुन सक्छ युरोप । मेरो कल्पनाको अनि नमराजदाइले सुनाएको युरोप मेरा लागि कथाजस्तो भयो ।
नेता जुन देशका पनि उस्तै । सरकार बीमा कम्पनीहरूसँग कमिसन लिएर चुपचाप बसेको छ ।
अनि खोइ नमराजदाइले भनेजस्तो युरोप !
जनता अनुशासित छन्, भुइँमा फोहोर फाल्दैनन्, प्रहरीको काम नै हुँदैन भन्थे दाइ त । यहाँ लकडाउनको समयमा घरमा बस्नुभन्दा केही न केही बहानाम हजारौँ मान्छे सडकमा छन्, ज्यानको माया नगरी । प्रहरीले लाखौँको संख्यामा जरिवाना रसिद नै काटेको छ । एक डेड सयजति त जेलमै कोचिए । आफूले लगाएको मास्क, पञ्जा आदि मनपरी फालेको दृश्य राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा देख्दा मन कुँडिन्छ ।
नेपालमा युरोपको शैक्षिक डिग्री भनेपछि केटा नहेरी छोरी दिन्थे । फलानाको छोरो बेलायतमा पढेर आएको रे ! फुर्ति नै बेग्लै । अहिले हजारौँको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अनलाइन कोर्स पढ्दै छन् महँगो शुल्क तिरेर । इन्टरनेटबाट पढेर डिग्री दिने रे अचेल । इन्टरनेटको भरमा हुने भए महिनाको लाखौँ तिरेर पढ्नलाई किन आउनुप¥यो फ्रान्स वा अर्को युरोपेली देशमा !
फ्रेन्च कम्पनी एअर बससँग नेपालले किनेर लगेको विमान युरोपेली आकाश र फ्रान्समै पनि उडाउन नमिल्ने रे ! हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो होला त ! नेपालका लागि युरोपेली आकाश प्रतिबन्धित हुनुमा कूटनीतिक पहुँच बलियो नहुनु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो ।
नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाला विमानलाई युरोपेली युनियनले केही वर्षदेखि कालोसूचीमा राखेको छ । नेपाली विमान अष्ट्रेलिया अनि युरोपेली मुलुकमा उड्दै पनि छ । यिनको नियम पनि अचम्मको छ । आफूलाई आवश्यक पर्दा उड्न मिल्ने मिल्ने, होइन भने कालोसूची !
प्रशिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जन्माउने र अत्याधुनिक प्रविधिले सुसज्जित प्रयोगशाला भएको देश भएर पनि फ्रान्सले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक खोप र औषधि बनाउन नसकेको देखिन्छ । युरोप महादेशका मुलुकहरू कोरोना महामारीका सन्दर्भमा आआफ्नै लागि मात्रै गर्ने हो भने युनियन हुनुको के अर्थ !
कोरोना भाइरसभन्दा माख्रोन भाइरस खतरा भन्ने सन्देश आफ्नो कौसीमा लेखेर झुन्ड्याएको आरोपमा प्रहरीले नन्त सहरमा एक फ्रेन्च महिलालाई प्रहरी हिरासतमा राखेको छ । खोइ त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ? यस्तो छ प्रजातान्त्रिक मुलुकको हालत ।
आर्थिक संकटले परिवर्तन भएको पनि हुन सक्छ युरोप । मेरो कल्पनाको अनि नमराजदाइले सुनाएको युरोप मेरा लागि कथाजस्तो भयो । युरोपले आफ्नो साख गुमाउदै गएको अनुभव हुन थालेको छ ।
(उप्रेती पेरिसमा बस्छन् ।)
प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०७७, बुधबार ७ : ०२ बजे
भरतपुरमा विजय भन्दा रेनु ११ सय १९ मतले अगाडि